Semalt: एक CSV फाईल के हो र यसलाई वेब पृष्ठमा कसरी प्रदर्शन गर्ने?
एक CSV (अल्पविराम-विभाजित मान) फाईलले टेबुलर डाटा (पाठ र संख्याहरू) सादा पाठको रूपमा भण्डार गर्न मद्दत गर्दछ। यस फाईलको प्रत्येक लाइन रेकर्डिंग वा जानकारी बचत गर्न सक्षम छ, र प्रत्येक रेकर्डमा बहुक्षेत्रहरू छन् जुन अल्पविरामद्वारा विभाजित गरियो। CSV फाईल ढाँचा प्रमाणित छैन, र केहि फाँटहरूमा इम्बेड गरिएको उद्धरण चिह्नहरू आवश्यक पर्दछ। त्यसोभए, CSV कार्यान्वयनमा एस्केप वर्णहरू र एस्केप दृश्यहरू समावेश हुन सक्छ। सबै अनुप्रयोग र उपकरणहरू जसले CSV फाईलहरू स्वीकार गर्दछन् डेलिमिटर वर्णहरू र उद्धरण क्यारेक्टरहरू छनौट गर्न विकल्प छ।
CSV मार्फत डाटा एक्सचेन्ज:
CSV र JSON दुई साझा डाटा एक्सचेन्ज ढाँचाहरू हुन्, र CSV विशेष रूपमा व्यापारीहरू, अनुप्रयोग विकासकर्ताहरू, प्रोग्रामरहरू, सामग्री क्युरेटरहरू, र वेबमास्टरहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ। यो उपभोक्ताहरू र वैज्ञानिक अनुप्रयोगहरू द्वारा व्यापक रूपमा समर्थित छ। सीएसभी को सबै भन्दा सामान्य र प्रख्यात प्रयोगहरू मध्ये ती प्रोग्रामरहरू बीच तालिका डाटाको आन्दोलन हो जुन मूल रूपले असंगत ढाँचाहरूमा अपरेट गर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं डाटाबेस प्रोग्राम बाट जानकारी स्थानान्तरण गर्न चाहानुहुन्छ (कि स्वामित्व ढाँचामा यो डाटा भण्डारण गर्न सक्दछ) स्प्रिेडसिटमा (जुन पूर्ण रूपले बिभिन्न ढाँचा प्रयोग गर्दछ), तपाईं CSV फाईल ढाँचाको लागि अप्ट इन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको काम पूरा गर्न।
कसरी वेबपेजमा CSV प्रदर्शन गर्ने?
तपाईं निम्न दुई उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ एउटा वेबपृष्ठमा CSV प्रदर्शन गर्न।
१. CSV किट
CSV किट इन्टरनेट को एक सबै भन्दा राम्रो उपयोगिताहरु हो; यसले सबै CSV र JSON फाईलहरूको साथ काम गर्न मद्दत गर्दछ। यो एक फ्रिवेयर हो जुन लिनक्स, विन्डोज र अन्य अपरेटिंग प्रणालीहरूसँग उपयुक्त छ। यो सामान्य सिन्ट्याक्स त्रुटिहरूको साथ CSV फाईल प्रमाणीकरण गर्न र सफा गर्न सक्षम छ। यो सेवा UNIX grep जस्तै ठीक काम गर्दछ तर CSV फाईलहरूको लागि मात्र अनुकूलित छ। यसले CSV फाईल वा वेबपृष्ठमा तपाईं कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ CREATE TABLE SQL स्टेटमेन्टहरू उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ।
२. CSV लाई वेब पृष्ठ प्लगइनमा
वेब पृष्ठमा CSV सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा उपयोगी WordPress प्लगइन हो। यसले वेबसाइटमा एक्सेल वा CSV फाईलहरूबाट सामग्री अपलोड गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं यो काम यो काम गर्न सक्नुहुनेछ बिभिन्न बिजेट्स (साइडबार र फुटर) को संयोजनमा प्लगइन प्रयोग गर्नका लागि। थप, यो प्रयोग गर्न सजिलो छ, सरल-कार्यान्वयन, र एक वेबसाइट मा एक CSV फाईल प्रदर्शन मद्दत गर्दछ। तपाईं सजिलैसँग डाउनलोड र यो प्लगइन सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि पूर्ण सक्रिय र स्थापित भएपछि तपाईले CSV फाईलहरू सेटिंग सेक्शनबाट अपलोड गर्नुपर्नेछ र वेबपृष्ठको छोटो कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् जहाँ तपाईं यस फाईलको सामग्री प्रदर्शन गर्न चाहानुहुन्छ। प्रक्रिया पूर्ण भएपछि CSV फाईल तपाईंको पोष्ट, पृष्ठ, साइडबार वा फुटरहरूमा प्रदर्शित हुनेछ। यो प्लगइन राम्रोसँग यसको प्रयोगकर्ता-मैत्री इंटरफेसका लागि परिचित छ र स्तम्भ हेडरको आधारमा तालिका सामग्री क्रमबद्ध गर्न सक्दछ। तपाई यसलाई पृष्ठमा बिभिन्न एक्सेल फाइलहरूबाट डाटा प्रदर्शन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र उत्तम तरिकामा चार्ट वा टेबल पेजिनेसन थप्न सक्नुहुन्छ।
यी दुबै विकल्पहरू ती वेबसाईटमा डाईनेमिक डाटा, CSV फाईलहरू वा एक्सेल फाइलहरू प्रदर्शन गर्न चाहनेहरूका लागि सहयोगी हुन्छन्। तिनीहरू स्थापना गर्न सजिलो छ र सबै प्रकारका वेबसाइटहरू र ब्लगहरूसँग उपयुक्त छ।